Nnwom 20 NA-TWI - Nkonimdi mpaebɔ - Awurade ntie wo wɔ - Bible Gateway
Nnwom 19Nnwom 21
Nnwom 20 Nkwa Asem (NA-TWI)
20 Awurade ntie wo wɔ wo haw mu! Yakob Nyankopɔn mmɔ wo ho ban! 2 Ɔmma wo ne mmoa mfi n’asɔrefi ne Sion Bepɔw so. 3 Onnye w’afɔrebɔde nyinaa na ne nyinaa nsɔ n’ani. 4 Ɔmma wo nea ehia wo, na wo nhyehyɛe nyinaa nyɛ ye. 5 Na yɛateɛm adi ahurusi wɔ wo nkonimdi no ho na yɛakamfo Onyankopɔn wɔ nea wayɛ ama wo no ho. Awurade nyɛ w’abisade nyinaa mma wo.